For Young Girls to Read: Men’s Love – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
For Young Girls to Read: Men’s Love
လစ်ဟာနေသော ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖြည့်သည့်အနေဖြင့် လူမှုရေး ကိစ္စများအတွက် အခမဲ့ အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် သရဖူမဂ္ဂဇင်းမှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်း ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ပင်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
ထိုတစ်နှစ်အတွင်း ရောက်ရှိလာသူအများစုမှာ အိမ်ထောင်ရေး ဒုက္ခသည်များသာ ဖြစ်လေသည်။ မိဘနှင့် အဆင်မပြေသဖြင့် ကျွန်တော့်ထံ လာရောက်ဆွေးနွေးသည့် လူငယ်လူရွယ်ဟူ၍ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်ဦး သာ ကြုံဖူးပါသေးသည်။ ထိုနည်းတူစွာ လာရောက် ဆွေးနွေးသူများထဲတွင် အမျိုးသားအရေအတွက်ကလည်း နှစ်ဦးမျှသာ ရှိပါသေးသည်။ အမျိုးသမီးအရေအတွက်ကမူ ဆိုခဲ့သည့် တစ်နှစ်တာအတွင်းတွင် ၆၀ ကျော်၊ ၇၀နားသို့ ရောက်ခဲ့ပါလေပြီ။
ထိုအရေအတွက်အားလုံးမှာ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း အိမ်ထောင်ရေး ဒုက္ခသည်များသာဖြစ်လေသည်။ ထို့ထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်စိတ်နှင့် ကဗျာဆန်ဆန် ပြောရသော် “ချစ်ဒုက္ခသည်”များဟုပင် ကင်ပွန်းတပ်ချင်လှပါသည်။
ကျွန်တော့်အားလာရောက်ဆွေးနွေးသူများမှာ အသက်၂၀ဝန်းကျင် မှ ၅၀ကျော်အရွယ်အထိ အရွယ်စုံ ပါဝင်ပြီး အလွှာပေါင်းစုံမှ လူတန်းစား ပေါင်းစုံလည်း ပါဝင်နေပါသည်။ အရွယ် အဘယ်မျှ ခြားခြား၊ အလွှာ အဘယ်မျှ ပြားပြား၊ အားလုံးမှာ တူညီလှသောအချက်ကတော့ ယောက်ျားတို့၏ အချစ်ကို ဘယ်လိုမှ နားမလည်ကြခြင်းသာဖြစ်ပါလေသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုတစ်ပတ်တွင်တော့ ယောက်ျားတို့၏ အချစ်ကို ကျကျနန ဝိတ္တာရ ချဲ့ပြရန် စိတ်ကူးလိုက်မိပါသည်။
ဘာကိုမှမပြောခင် အချစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့် ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံကို အရင်ဦးဆုံး တင်ပြလိုပါသည်။
ထို “အချစ်”ဆိုသောအရာကို မည်သူမျှ ခိုင်လုံ တိကျသော အနက် မဖွင့်ဆိုနိုင်သေးတာက သေချာလှပါသည်။ ဆင်ဆိုသည်မှာ နံရံကြီးပါတကားဟု ဆိုသလိုပင် အချစ်ဆိုတာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းပါဟုဆိုသူ က ဆို၊ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟု ပြောသူက ပြော၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟု ဖွင့်သူက ဖွင့်နေကြသည် မှန်သော်လည်း အများ သဘောတူ တစ်ညီတစ်ညွှတ်တည်း ဖွင့်ဆိုထားသော အနက်မျိုးကို ဘယ်မှာမှ မတွေ့နိုင်သည်မှာလည်း အမှန်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ထို“အချစ်”သည် အလွန် စီးပွားဖြစ်သည်မှာကား သေချာ လှပါသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် အောင်မြင်သော စာပေ၊ ဝတ္ထု၊ ကဗျာ၊ သီချင်း၊ ဇာတ်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုအားလုံးသည် အဆိုပါဘယ်သူမှ ကျကျနနမသိလှသော “ရွှေအချစ်”ကို ခုတုံး လုပ်ထားကြသည်များသာ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ခုတုံးလုပ်ကြရာတွင်လည်း အနုပညာ မမြောက် မြောက်အောင် အလင်္ကာတန်ဆာများကိုလည်း နင်းခွပြီး ဆင်ပေးလိုက်ကြပြန်ရာ ဘာမှ မသိသေးသူ လူငယ်လူရွယ်များအဖို့ ဝတ္ထုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ သီချင်းတွေထဲကလိုမှ မချစ်ပြတတ်လျှင် ယခုပင် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နှင့် သေပွဲဝင်ရတော့မလောက် အောက်မေ့ကုန်ကြလေတော့သည်။
တစ်ခေတ်ဆီက အောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့သော “ချစ်သူ့နယ်မြေသည်သာ ငြိမ်းချမ်းနယ်မြေ”ဆိုသော သီချင်းကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် လင်နောက် လိုက်ပြေးသူ မိန်းကလေးပေါင်း အများအပြား ရှိခဲ့ပါသည်ဟု တစ်နေရာတွင် ဖတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ဝင်းဦး၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၊ မောင်မောင်မြင့်လွင်၊ ငြိမ်းကျော်၊ ကာတွန်းမြင့်သိန်းစသူတို့၏ဝတ္ထုများ၊ ရုပ်ပြ ဇာတ်လမ်းများကြောင့် ၁၃-၄နှစ်အရွယ်မှ စတင်ကာ တော်တော်လေး အသက်ရသည်အထိ ထိုအချစ်ဆိုသော ဘာမှန်းမသိသည့် အရာကြီးကို အဟုတ် မှတ်ခဲ့ဖူးပါသည်၊ အထင်ကြီးခဲ့ဖူးပါသည်၊ ကိုးကွယ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
အလားတူပင် ရိုမီယိုနှင့်ဂျူလိယက်လို ဇာတ်လမ်းမျိုး၊ ရှင်မွေ့ နွမ်းနှင့်မင်းနန္ဒာလို ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့တွေမှာ အချစ်အတွက်ဖြင့် အသက်ပင်စွန့်ချင်စိတ်တွေပေါက်အောင် လှုံ့ဆော် နှိုးဆွခဲ့ပြန်သည်။
ထိုသို့ဖြင့် ၄၅နှစ်တာခရီးကို နီးကပ်လာပြီဖြစ်သော ကျွန်တော့်ဘဝသက်တမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းအတော်များများ၊ အတိအကျဆိုရလျှင် ၃၂နှစ်နီးပါး အတွင်းတွင် အနှီစာများ၊ တေးသီချင်းများ၊ ကဗျာဝတ္ထုများနှင့် မနီးရိုးစွဲ သည်းသည်းမည်းမည်း ချစ်ခဲ့ဖူးသည့် အကြိမ်အရေအတွက်မှာ ၃၂ကြိမ်ထက် မနည်းပါ။
ထိုအနေအထားတွင် အချစ်ကို မည်သို့ ခံယူ နားလည်ပါသနည်းဟု အကြင်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်အားမေးလာပါလျှင် အဖြေ အသင့် ရှိပါသည်။
(၁) အလွန်ရူးလို့ကောင်းသော ခံစားမှု
(၂) အမှန်အမှား ခွဲခြားနိုင်စွမ်း (ဝါ) ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းသွားစေတတ်သော ခံစားမှု
(၃) (ကျွန်တော့်အတွက်ဖြင့်) အလွန်ဆုံးမှ တစ်နှစ်လောက်သာ တာရှည်ခံသော ခံစားမှု ဟူ၍ပင် ပြတ်သားတိကျစွာဖြေလိုက်ချင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါက အချစ်ကို ယုံကြည်ပါသလားဟု မေးလာပါကလည်း လုံးဝဥဿုံ မယုံကြည်ပါဟုသာ ဖြေလိုက်ပါဦးမည်။
ခံစားမှုတစ်ရပ်အနေနှင့် အလွန် ခံစားလို့ ကောင်းလှသည် မှန်သော်လည်း၊ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်လျှင် အနုပညာပစ္စည်း ထုတ်လုပ် ဖန်တီးရာတွင် အလွန့်အလွန် အသုံးဝင်လှသော ခံစားမှုမျိုးဖြစ်ငြားလည်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်မူ တစ်စက်ကလေးသော်မှ အသုံးမတည့်၊ အရာမဝင်လှသည့်အပြင် ဘဝကို အချိန်မရွေး နှောင့်ယှက်နိုင်၊ ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည့် တွန်းအားတစ်ခု အဖြစ်သာ ရိုးသားစွာ မြင်ပါသည်။
ယင်းသို့ ဆိုလိုက်သည့်အတွက် နောင်လွဲနောင်ခါ ထိုသို့မချစ်ဘဲ နေဖြစ်တော့မည်လား၊ အချစ်အား ဝေးဝေး ရှောင်တော့မည်လားဟု မေးလာကြဦးမည် ဆိုလျှင်လည်း ဟင့်အင်းဟုသာ တုံးတိတိ ဖြေမိရပါလေဦးမည်။
အကြောင်းသော်ကား တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်မြဲသံသရာတွင် အဖိုနှင့် အမတို့ တွေ့ရ၊ ကြုံရ၊ ဆုံရ၊ ကွဲရတာတွေနှင့် ကြုံဖူးဖန် များလွန်းမက များခဲ့ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဖွဲတစ်ဆုပ်မက ဆန်အိတ်ပင် ထမ်းနိုင်နေဆဲ ပုထုဇဉ် လူယောက်ျားတစ်ဦးအနေဖြင့် အနာဂတ်အတွက် ကတိပဋိဉာဉ် မပြုရဲသောကြောင့်ပင်။
သို့သော်… ယခုအနေအထားတွင်ရှိနေသော စိတ်အခြေအနေနှင့်ပင် အနာဂတ်အတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာပြောရဲသည်ကား အချစ်ကို ခံစားမိကောင်း ခံစားဖြစ်ဦးမည် ဖြစ်သည့်တိုင် ကျွန်တော့် စီးပွားရေးဘဝ၊ လူမှုရေးဘဝနှင့် အိမ်ထောင်ရေးဘဝကို အပွန်းအပဲ့မခံရလေအောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားမိမည့်အချက်ကိုပင် ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်တော်သည် ယောကျာ်းတစ်ယောက်သာ ဖြစ်သဖြင့် ယောကျာ်း တစ်ယောက်အနေနှင့် ခံစားရသော အချစ်အကြောင်းကိုသာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြောနိုင်ပါသည်၊ ပြောတတ်ပါသည်၊ ပြောရဲပါသည်။
မိန်းမသားတို့၏အချစ်ကိုမူ နားလည်း မလည်ပါ၊ ပြောလည်း မပြောနိုင်ပါ၊ ပြောလည်း မပြောရဲပါ။
ပညာရပ်သဘောအရ ကျားနှင့်မတို့သည် ဦးနှောက်၏ဝဲခြမ်း၊ ယာခြမ်းကို စိုက်ထုတ် သုံးစွဲပုံချင်း ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေပါသည်။ ယင်းသို့ ဆန့်ကျင်နေသည့်အတွက် အရာရာတွင်လည်း မိန်းမသားတို့၏ ရှုမြင် သုံးသပ်ပုံ၊ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပုံများမှာလည်း ကွဲပြားနေတတ်ပါသည်။ ထိုအရာရာတွင် အချစ်လည်းပါပါသည်။
အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မိန်းမသားများစွာနှင့် ရင်းနှီးခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား ကျွန်တော်ကား မိန်းမသားများ ၏နှလုံးသားကို မည်သို့မျှ နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိပါကြောင်း တင်ကြို ဝန်ခံထားလိုပါသည်။
ဆက်လက်တင်ပြသွားမည့် အချစ်အကြောင်းမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ အမြင်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ခံစားမှု သက်သက်သာ ဖြစ်ပြီး ယောက်ျား အများစုတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်မြဲ အချစ်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအချစ်သည် မိန်းမသားတို့၏ နှလုံးအိမ်တွင် ခိုဝင်ရစ်ဝဲ နှောင်တဲ ပေါ်ဖြစ်တတ်သော အချစ်နှင့် လားလားမျှ မဆိုင်ဟု စာဖတ်သူများ နားလည်ထားစေလိုပါသည်။ တစ်ဖန်၊ မိန်းမသားတို့၏ အချစ်ကို မိန်းမသားတစ်ဦးဦးက ရေးမှသာလည်း သဘာဝကျနိုင်၊ အဆီအငေါ် တည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
တင်ပြရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာမူ နိဒါန်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မိန်းမသားများက ယောကျာ်းများ၏ အချစ်ကို သူတို့၏ အချစ်နှင့် နှိုင်းဆကာ အထင်ကြီးမိ၊ ယုံစားမိ၊ ပုံအပ်မိတတ်ကြသော သဘောကို မျက်ဝါး ထင်ထင် မြင်လာရသောအခါ ကျားတို့၏ အချစ်ကား သည်သို့ပါလားဟု ရှင်းရှင်း ပြတ်ပြတ်မြင်စေ့ချင်သော စေတနာက နိုးလာသောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုင်း… တစ်ချက်ချင်း အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး ပြောပါတော့မည်။
၁။ ယောကျာ်းတို့၏အချစ်သည် အချိန်ကာလကို ကျော်လွှားနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ ယောကျာ်းတို့၏အချစ်သည် ရေရှည်မခံပါ။ ရှိတ်စပီးယားက ပြောဖူးပါသည်။ “လူတစ်ယောက်ကို တစ်သက်လုံး ချစ်တယ်လို့ ဆိုတာဟာ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်တည်းက ထာဝရ တောက်လောင်နေမယ်လို့ ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ”ဟူလို။
မည်သည့်ဖယောင်းတိုင်မျှ ထာဝရ တောက်လောင်နိုင်စွမ်း မရှိသည်ကိုသိလျှင် လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို တစ်သက်လုံးချစ်သည် ဆိုသော အချက်ကလည်း မဖြစ်နိုင်မှန်း လူတိုင်းသိသင့်ကြပါသည်။
သည်နေရာတွင် ကျွန်တော် ပြောနေသောအချစ်မှာ “ကိလေသာချစ်” ဟုခေါ်သော “ဖိုမချစ်”ကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။ အိမ်ထောင်သက် နှစ်ပေါင်း ၅၀မကသော အဘိုးကြီးနှင့် အြွားကြီး တစ်ဦးကို တစ်ဦး ကြင်ကြင်နာနာ၊ ယုယုယယနှင့် ဖေးဖေးမမ ချစ်ခင်ကြသည့်အချစ်မျိုးမှာ ကျွန်တော် ပြောနေသော ကိလေသာချစ်နှင့် လားလားမျှ မဆိုင်ပါ။
ကိလေသာချစ်မှာမူ အလွန် ကောက်ရိုးမီး ဆန်ပါသည်။ ဟုန်းခနဲ ထတောက်ပြီး အလျှံငြီးငြီးနှင့် တစ်သက်လုံး မပြီးနိုင် မစီးနိုင်ဘဲ လောင်နေတော့မလို ထင်တတ်ကြပါသည်။ လက်တွေ့တွင်မူ ခဏနှင့် ငြိမ်းသွားတတ်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ထိုခဏသည် လနှင့် ချီတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံများတွင် နှစ်နှင့်ချီတတ်ပါသည်။ သိုးဆောင်းဘာသာစကားမှာတော့ ထိုစိတ်အနေကို infatuation ဟုခေါ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ “မွှန်စိတ်” ဟု ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ မည်မျှပင် မွှန်မွှန် ထိုမွှန်စိတ်သည် ကြာရှည်တော့ မခံသည်လည်းအမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ ပြောရလျှင်မူ အနည်းဆုံး ၃-၄လ၊ အများဆုံး ၁၈လ၊ လ၂၀လောက်သာခံပါသည်။
၂။ ယောက်ျားတို့၏အချစ်သည် အဆိပ်တက်နေခိုက်တွင် အလွန် အရှိန်ပြင်းလှပါသည်။
ထိုသို့ မွှန်နေချိန်မျိုးတွင်တော့ အချစ်အတွက်ပင် အသက်ဖြင့် သေသေဟုလည်း အော်ကောင်းအော်နေပါမည်၊ ခင့်ကိုမှ မရလျှင်ဖြင့် မောင့်ဘဝကြီး တစ်ခုလုံး ပျက်စီးပါတော့မယ်ခင်ရဲ့ဟုလည်း အလေးအနက် ပြောကောင်း ပြောနေပါလိမ့်မည်။ အချစ်နဲ့စစ်မှာ အားလုံး တရားတယ်ဟုဆိုကာ ခိုးပြေးဖို့၊ ကားတင်ဖို့ ဝန်မလေးသည့် စိတ်အနေအထားမျိုးကိုလည်း ရောက်ကောင်း ရောက်နေပါလိမ့်မည်။
သေချာသည်မှာ ထိုအနေအထားတွင် ထိုသို့ ခံစားနေရသည်မှာ အမှန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမသားများ ယုံကြည်လာစေရန် သက်သက်မဲ့ လုပ်ကြံ လီဆယ်နေသည်မျိုး လုံးလုံးမဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ထိုအနေအထားသည် အချိန်ကာလ တစ်ခုသို့ ရောက်လျှင် ဟုတ်ခနဲ ငြိမ်းသွားပြီး ဘယ်လိုမှ ပြန်နိုးထလာလေ့ မရှိတော့မှာလည်း မှန်မှန် မှန်မှန်နှင့် အဖန်ဖန် မြည်နေအောင်ကို မှန်နေပြန်ပါသည်။
အချစ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် မိန်းမတွေမှာ နှာခေါင်း မပါဟု ဆိုကြသကဲ့သို့ပင် ထိုသို့မွှန်နေခိုက်တွင် ယောက်ျားတို့မှာလည်း နှာခေါင်း မရှိတော့ပါ။ နှာခေါင်းတင်မဟုတ်၊ ဦးနှောက်လည်း မရှိတော့ပါ။ ထိုအချိန်မျိုးမှာ အသိဉာဏ် ဘယ်လောက် ကြီးကြီး၊ ပညာ ဘယ်လောက် တတ်တတ် ထင်ရာစိုင်းဖို့ ဝန်မလေးအောင် ဖြစ်နေတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် သေချာသည်ထက် သေချာအောင် ထပ်ပြောလိုပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့… မည်မျှပင် ပြင်းပြင်း၊ မည်မျှပင် သန်သန် ထိုအရှိန်ကား ကောက်ရိုးမီးသာ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ယောက်ျား အတော်များများသည် ရမ္မက်နှင့် အချစ်ကို ရောထွေး ခံစားတတ်ကြပါသည်။
“ခင့်ကိုဖြင့် မောင်တပ်မက်လိုက်တာကွယ်”ဟု အဘယ် ယောကျာ်းသား၏ နှုတ်ကမှ ထွက်လာမည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် “ခင်နဲ့ဖြင့် ကိုယ်လက် နှီးနှော ချင်လိုက်တာကွယ်”ဟုလည်း ဘယ်သူကမှ ပြောဖြစ်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ ပြောပါကလည်း ပါးချခံရကိန်း ရှိမှန်း အတောင် နှစ်ဆယ်ဝတ်တွေ အားလုံး ကောင်းကောင်း သိကြပါသည်။ ထိုရောအခါ ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းများသည် “ချစ်တယ်”ဟူသော စကားအလှကို ခုတုံးလုပ် သုံးတတ်ကြပါသည်။
“ခင့်ကိုမှ မရရင် သေရပါတော့မယ်”ဟု အတည်ပေါက် ပြောနေသည့်အခါများတွင်လည်း ခင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှ မရရင် သေရပါတော့မယ် ဟူသော အနက်က ပိုထွက်နေပါသည်။ ခင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရပြီးသည့် နောက်တွင်တော့ အားလုံး လျောက်လျားတွေ ဖြစ်ကုန်မည်ကို ခင်တို့ အားလုံး ကြိုမတွေးမိကြခြင်းကြောင့်သာ အိမ်ထောင်ရေးဘဝမှာ မိန်းမသားတချို့ ဒူးနှင့် မျက်ရည်သုတ်နေရခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
အထက်ပါ အချက်သုံးချက်သည် ယောက်ျားတို့၏ ရင်၌ ဖြစ်ပေါ်တတ်မြဲ အချစ်၏ သရုပ်သကန်ကို ပေါ်လွင် ထင်ရှားစေလောက်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
သည်နေရာတွင် တစ်သက်လုံး တစ်ယောက်တည်းကိုသာ ချစ်သွားသောသူများ မရှိတော့ဘူးလားဟုဆိုလျှင် ရှိတော့ ရှိပါသည်။ သို့သော် အလွန် ရှားလှပါသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင်တွေ့ဆက်ဆံဖူးသမျှ လူပေါင်းများစွာကို လေ့လာ အကဲခတ်ကြည့်သောအခါ ထိုသို့တစ်ယောက်တည်းကို တစ်သက်လုံး ချစ်နေသည်ဆိုသည့် လူစားမျိုးများမှာ အများလက်ခံထားသော လိင်စိတ်မျိုးနှင့် မဟုတ်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
သေချာသည်မှာကတော့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားများထဲတွင် ထိုသို့ တစ်သက်လုံး တစ်ယောက်တည်း ချစ်သွားသူများကို တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်မှ မတွေ့ဖူးခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ လူပျိုကြီး တစ်ကိုယ်တည်းသမားများအတွင်းမှာသာ ထိုထိုသော ကိုကိုသစ္စာများကို ရံဖန်ရံခါ တွေ့ရတတ်လေသည်။
လူပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးနှင့်၊ လစ်လျှင်လစ်သလို ဟိုဟိုသည်သည် ရမ်းကားတတ်သော လူပျိုသိုးကြီးများ ရှိသလို ဆိုခဲ့သည့် ကိုကိုသစ္စာများလည်း ရှိသည်။ သို့သော် ထိုကိုကိုသစ္စာများ မူမမှန်သည်ကိုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အနှီကိုကိုသစ္စာများ သည် ယောက်ျားစိတ်ချည်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ရှိမနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယောက်ျားတစ်ယောက်တွင် ရှိတတ်မြဲ လိင်စိတ်များ အားနည်း ချို့ယွင်းနေတတ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် ပြောင်းပြန် ပြန်ပြောရလျှင် အဖိုလိင်စိတ်ရှိသော လူယောကျာ်းတစ်ယောက်၏အချစ်ဟူသည်ကား အထက်တွင် ပြဆိုခဲ့သည့် အချက်သုံးချက် ရောယှက်ပါဝင်နေသည်ဟူလို။
နောက်တစ်မျိုးမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို ခါးဝတ် ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲမြဲမြံမြံနှင့် သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး လုံးလုံးကြီး စောင့်ထိန်းတတ်သူများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုထိုသောသူများမှာ ရင်၌ တစ်ကြိမ်တစ်ခါဖြစ်ပေါ် ပေါက်ကွဲဖူးသော အချစ်ခံစားမှုဖြင့် အိမ်ထောင် တစ်ခုကိုထူထောင်၊ ထို့နောက် ထိုအချစ်ခံစားမှု ပျက်သုဉ်း ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါမှာလည်း မိမိအိမ်ထောင်ကို သစ္စာရှိရှိနှင့် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနေပါလိမ့်မည်။ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံခံစားမှုများကိုလည်း သတိကြီးကြီး၊ လုံ့လကောင်းကောင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပြီး နေထိုင် သွားပါလိမ့်မည်။
ထိုထိုသော စာရိတ္တနှင့် အကျင့်စာဂ ကောင်းမြတ်သော ယောက်ျား များလည်း မရှိဘူးဟု ယတိပြတ်ပြော၍မရ၊ ရှိနိုင်လောက်ပါသည်။ သို့သော် တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်၊ တစ်ထောင်မှာတစ်ယောက်၊ တစ်သောင်းမှာတစ်ယောက်ဟု ဆိုနိုင်လောက်အောင် ရှားပါးသောအရေအတွက်မျှသာ ဖြစ်သည်ကို ဒေါ်ဒေါ်၊ မမများ သိထားကြစေချင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်လျှင် မိန်းမသားတို့အနေဖြင့် အစ်ကိုပုရိသတို့အား ဝေရာမဏိ၊ ဝေးစွာ ရှောင်ရတော့မည်လောဟု မေးစရာ အကြောင်းရှိပါသည်။
ထိုသို့ ရှောင်ကြဉ်စေလိုသော သဘော စေတနာဖြင့် ယောက်ျားတို့၏ ချစ်ခြင်းသရုပ်ကို ဖွင့်ထုတ် အန်ချခြင်း မဟုတ်ပါ။
အဓိကပြောလိုသည်မှာ ယောကျာ်းတို့၏ သဘောကို ယခုကဲ့သို့ တင်တင်ကြိုကြို သိထားကြမည်ဆိုလျှင်ဖြင့် ပြောတိုင်းယုံ၊ ကြုံတိုင်း သနား၊ ကြားတိုင်း အမှန်မှတ် နေရသည့်ဘဝမှ လွတ်မြောက် ကျော်လွှားနိုင်ကြမည်ဟု ယုံကြည်မိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်ကတော့ ကျွန်တော် အထက်က ပြောခဲ့သောစကားများကို အမိအဖများက မိမိတို့၏ သမီးငယ်များ ကြီးကောင်ဝင်သည်နှင့် စတင် ပို့ချသင်ကြား ပေးနိုင်က အလွန်ပင် လျော်ကန်သင့်မြတ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်ထံ ရောက်လာသူ မိန်းမသားတချို့မှာ မိဘများက ထိုသို့ သွန်သင် ညွှန်ကြားထားခြင်း အလျဉ်း မရှိသည့်အပြင် ရည်းစားရှိပြီဆိုသည်နှင့် ဖိဆူ၊ ဖိရိုက်ခံရတာမျိုးများကိုသာ ကြုံရပြီး အသားနာခံနေရ၊ စိတ်ညစ်ခံနေရသောအနေအထားမှ ယာယီ လွတ်မြောက်လိုစိတ်နှင့် ဇွတ်မှိတ်မိကြရာမှ ဘဝကြီး တစ်ခုလုံး ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်ရသူတွေက များနေပါသည်။ ထိုထိုသော အမျိုးသမီးများကို တွေ့ရသောအခါ ကျွန်တော့်မှာ ရင်ထုမနာ ဖြစ်ရသလို ဆင်ခြင်ဉာဏ် ကင်းမဲ့လှသော သူတို့၏ အမိအဘများကိုလည်း ကရုဏာသက်မိရပါသေးသည်။
ထိုအတွက် မိန်းမသားတို့ သတိချပ်ရန်ကို အထက်ကနှယ်ပင် အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး ပြောလိုပါသည်။
၁။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်က မိမိအား မရလျှင် မနေနိုင်အောင်ချစ် နေပါပြီ၊ မရလျှင်သေရပါတော့မည်ဟု ပြောလာသည့်အခါတွင် သတိကြီးကြီး ထားသင့်ပါသည်။
ထိုစကားမျိုးကို မယုံကြပါနှင့်ဟု မပြောလိုပါ။ အထက်တွင် ရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ပြောသူက ထိုသို့ ပြောနေသည်မှာ လီဆယ်နေခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် ယုံမည်ဆိုက ယုံနိုင်ပါသည်။
သို့ရာတွင် မမေ့လျော့သင့်သည်မှာကား မရလျှင် သေရပါတော့မည်ဆိုသည့် အကြင်ယောက်ျား၏ အခြေအနေသည် ထိုခဏအတွက်သာ အာမခံနိုင်ခြင်းကို မမေ့လျော့သင့်ပါ။
၂။ မရခင်ဖျာလိုလိပ် ထိပ်ပေါ်တင်၊ ရပြီးတော့ ဖျာလိုခင်းပြီး နင်းခြေတတ်သော မောင်တို့ယောက်ျားတွေ ဆိုသော စကားမှာ ခြွင်းချက် မရှိအောင် မှန်ကန်ပါသည်။
မရခင်ဆိုသည့်စကားမှာ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မပိုင်ဆိုင်ရခင်ဟူပြီး နားလည်ထားကြစေလိုပါသည်။ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင် ရယူပြီးသည့်နောက်တွင် ယောကျာ်းအတော်များများ၊ ယောကျာ်းတစ်ရာတွင် ၉၈ယောက်လောက်ကတော့ အချိုးပြောင်းသွားကြသည်ချည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ထက်ဆိုးသည်မှာကား “ယောကျာ်းရသည်၊” “မိန်းမရသည်” ဟု ပြောလေ့ ရှိကြသော အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဖျာလို ခင်းကာ အနင်းခံရတတ်သည့်အချက်ကိုလည်း မမေ့လျော့သင့် ပါ။ အိမ်ထောင်မကျခင်တုန်းက ခင့်မျက်နှာ တစ်ချက် အညိုမခံခဲ့ဖူးသူပေမင့် အိမ်ထောင်သည် ဘဝကျတော့ မျက်နှာညိုရုံမကလို့ မတ်တတ်က လဲပြီး သေပွဲဝင်တော့မတတ် ဖြစ်နေသည့်တိုင် ထင်ရာ လုပ်တတ်သော ယောက်ျားသားများလည်း ဤဒွန္နယာမှာ အသင်္ချာ အသင်္ချေ ရှိနေပါလေသည်။
၃။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်က မိမိအား အလိုချင်ဆုံးအချိန်တွင် သူ့ ကို မယူမိအောင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသည်။ ထို့အတူ မိမိက သူ့ကို အချစ်မိဆုံး အချိန်တွင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အရေးကို လုံးဝ မတွေးသင့်ပါ။
မွှန်သည်ဟု ရှေ့မှာ ရေးပြခဲ့ပါသည်။ မွှန်ခြင်းသည် မည်သည့် နေရာတွင်မှ မကောင်းပါ။ မွှန်စိတ်မှာ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း လုံးလုံး ကင်းမဲ့သွားစေနိုင်သော အာနိသင် ပြင်းပြင်းကြီး ပါရှိနေပါသည်။
ဒေါသစိတ် မွှန်သောကြောင့် တစ်ဖက်သားကို အနာတရ ဖြစ်စေရုံမျှမက သူတစ်ပါး၏ အသက်ကို ရန်ရှာမိသည်အထိ မှားယွင်းသွားစေနိုင်ပါသည်။ ဒေါသပြေတော့မှ နောင်တ ရမိကြစမြဲလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ရှက်စိတ်မွှန်သောအခါ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်ဖြစ်ရာမှ ကိုယ့်အသက်ကိုပင် ရန်ရှာတတ်သည်အထိလည်း မှားယွင်းစေနိုင်ပြန်ပါသေးသည်။
အလားတူပင်၊ အချစ်စိတ် မွှန်နေချိန်မျိုးတွင် ယောက်ျားသားများရော၊ မိန်းမသားများပါ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ကင်းမဲ့နေတတ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် သူက ကိုယ့်ကို အလိုချင်ဆုံးအချိန်မှာ သူ့ကို မယူဖို့၊ ကိုယ်က သူ့ကို အချစ်မိရဆုံးအချိန်မှာလည်း အိမ်ထောင်မပြုဖြစ်ကြဖို့ အလွန် အရေးကြီးလှပါသည်။ ထိုသို့ အချစ်စိတ် အဆိပ်တက်နေခိုက်တွင် ချမိသမျှ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အားလုံးမှာ နှစ်အနည်းငယ်မျှ ကြာသည်နှင့် နောင်တရစရာတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါသည်။
ထိုစကားကိုမယုံလျှင် မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ နီးစပ်ရာ အိမ်ထောင်သည်များကို တစ်ယောက်စီ ကျကျနန မေးစမ်းကြည့်ကြစေလိုပါသည်။
၄။ ခိုင်မာမြဲမြံသော အိမ်ထောင်ရေးတစ်ရပ် တည်ဆောက်လိုပါက အချိန်ကောင်းကောင်း ယူသင့်ပါသည်။
အထက်က အချက်နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းစကားပင်ဖြစ်ပါ သည်။
ရှေးခေတ်က သုံးနှစ်သုံးမိုးဟူသော ဆိုရိုးစကားမှာ အကြောင်းမဲ့ မဟုတ်ပါ။ အလားတူပင် လက်မထပ်ဘဲ အတူနေသည်ဟူသော ကျွန်တော်တို့နှင့် ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်သည့် အနောက်တိုင်းဓလေ့မှာလည်း တရားကိုယ်အားဖြင့်မူ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းသော်ကား လူအကြောင်း ပေါင်းကြည့်မှ သိရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်နေသောကြောင့်တည်း။ ကြာကြာဝါးမှ ခါးမှန်းသိ ဆိုသည်မှာလည်း လူတွေသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်နှင့် ချစ်နေသူမို့ ထိုသူ့ကို လူစာရင်းထဲမှ နုတ်ပယ်ထား၍ မရစကောင်းပါ။ သူသည်လည်း လူသာ ဖြစ်သဖြင့် ကြာကြာ ဝါးကြည့်လျှင် ခါးချင် ခါးနေနိုင်ပါသည်။
ကျုပ်တို့ခေတ်က သိပ္ပံခေတ်၊ သုံးနှစ်သုံးမိုး စောင့်စရာမလိုဘူးဟု ပြောသောသူများကို အင်းလေ… ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဟုသာ စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြောနေလိုက်ပါမည်။ လက်တွေ့တွင် ခိုင်မာမြဲမြံသော အိမ်ထောင်ရေးများ၏ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ အိမ်ထောင်မပြုမီ အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြကြောင်းကို အထင်အရှားတွေ့ရပါသည်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ မွှန်စိတ်များ ကျကျနန ပျောက်ပြယ်ပြီး တည်ငြိမ်နိုင်သော အနေအထားသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာရန် အကြာဆုံး လိုအပ်သောအချိန်မှာ လပေါင်း၂၀ဟုအထက်တွင် တင်ပြခဲ့ပါပြီ။ ထို အတွက် အိမ်ထောင်ပြုရန် ရည်သန် စိတ်ကူးနေသော မိန်းကလေးများအနေနှင့် သမီးရည်းစားသက်အားဖြင့် အနည်းဆုံး လပေါင်း၂၀တော့ အချိန်ယူပြီးမှ စိတ်ကူးသင့်ကြပါသည်။
အချိန်ကြာကြာယူလေ၊ မိမိဘဝ တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးလှသော အိမ်ထောင်ရေးမှာ ရတက်ပွေစရာ နည်းလေလေ ဖြစ်နေသည်မို့ ဖြစ်နိုင်လျှင်တော့ အချိန်ကို ၂၄လ (ဝါ) နှစ်နှစ်တာတော့ အနည်းဆုံး ယူကြပါဟု ပြောချင်ပါသည်။
ကြာလေလေ၊ ခိုင်မြဲလေလေဆိုသည့်အချက်ကို သတိထားမိကြလျှင်ဖြင့် ထို့ထက် အချိန်ယူနိုင်သေးကလည်း ယူသင့်ပါသည်။
၅။ မည်မျှ အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ခဲ့လင့်ကစား မိမိ၏ လင်သားသည် တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တွင် ဖောက်ပြားနိုင်သေးသည်၊ နောက်တစ်ယောက် အပေါ်တွင် အရူးအမူး ဖြစ်နိုင်သေးသည်ဆိုခြင်းကိုလည်း မမေ့သင့်ပါ။ မိမိလင်သား၏ ဘဝ အဆင့်အတန်း၊ အသိဉာဏ်နှင့် ကျောင်းသင် ပညာများသည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် မဖောက်ပြားဟု အာမခံချက် ပေးနိုင်သော အရာများမဟုတ်ကြောင်းကို အစောကြီးကတည်းက နားလည်ခံယူ ထားသင့်ပါသည်။
လူဟူသည်မှာ ပြောင်းလဲနေတတ်သော သဘာဝရှိကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်ထားလျှင် ဤအချက်ကို သတိချပ်မိကြပါလိမ့်မည်။
နောက်တစ်ချက်မှာ လွယ်လျှင် သူကြွယ်တောင် မနေဘူး ဆိုသကဲ့သို့ပင် ဖိုမကိစ္စတွင်လည်း အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိတတ်သော သဘောက ရှိနှင့်ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျားဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ်၊ ပုထုဇဉ် လူသားများအနေဖြင့် အတွေ့ကို ရှောင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းနေတတ်ပါသည်။ မိန်းမသားများအနေဖြင့်က အရှက်တရား၊ အကြောက်တရားနှင့် လူ့စည်းကမ်း လူ့ကျင့်ဝတ်များကြောင့် ယောက်ျားများနှင့် စာလျှင် ထိုအတွေ့ကို မရကုပ်ကပ် ရှောင်ချင် ရှောင်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။
ယောကျာ်းသားတို့အတွက်မူ “ယောကျာ်းကောင်း မောင်းမ တစ်ထောင်”ဟူသော သွေးထိုးစကားများက ရှေ့တွင် ရှိနှင့်နေပြီးဖြစ်သလို ဒါမျိုးကို ရှက်ရကောင်းမှန်းလည်း သိပ် မသိ၊ ဥပဒေမှာကလည်း အဘယ်မိန်းမကမှ နောက်မိန်းမသားတစ်ဦးကို “လင်ခိုးမှု”ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူလို့ မရ ဖြစ်နေသည့်အတွက် တကယ့် “အတွေ့”ကို တွေ့ရသည့်အခါ ရှောင်ဖို့ထက် ဇွတ်တိုးဖြစ်ဖို့ အကြောင်းက ပိုများနေတတ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ယောကျာ်းတို့၏ “ဘဝင်“ကလည်း တစ်ပြဿနာဖြစ် ပါသည်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် လူတကာနှင့် တွဲလျှင်ပင် လူ့ဘောင်က “မျက်နှာများသည်“ဟု ဆိုကာ သွားပုပ်လေလွင့် ပြောတတ်ကြသော်လည်း ယောက်ျားတစ်ယောက် လူတကာနှင့် တွဲနေလျှင်မူ “ကိုဖိုးစွံ”ဟု ထောမနာပြုတတ်ကြပါသေးသည်။ ထိုရောအခါ အကြင် ယောက်ျားသည် အခြား ယောက်ျားများ အလယ်တွင် မိမိက ခေါင်းတစ်လုံး ပိုသာနေသည်ဟု အခြောက်တိုက် သွေးနားထင် ရောက်သွားတတ်ပါသည်။ ထိုသို့ သွေးနားထင် ရောက်လွယ်သော “ကျားတို့၏ဘဝင်”သည် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ခါမှ ထိမ်းမရ၊ ဆွဲမနိုင်အောင် ပိုမြင့်ချင် မြင့်သွားတတ်ပါသေးသည်။
ထိုအခါမျိုးများတွင် မိန်းမသားများအနေဖြင့် မိမိ၏ခင်ပွန်းသည်ကို အကြမ်းနည်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ရန် လုံးလုံးမစဉ်းစားသင့်ပါ။ ဖြစ်တတ်သော သဘာဝကို ဆင်ခြင်ကာ ဉာဏ်ကို လွှာသုံးပြီး ကိုင်တွယ်တတ်မှသာ ထိုအချိန်အခါကို ကျော်လွှားနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အခြား မိန်းမသားတစ်ဦးအပေါ်တွင် မွှန်စိတ်ဖြစ်သည်မှာလည်း မိမိအပေါ်တွင် တစ်ချိန်က မွှန်ခဲ့ဖူးသလို ခဏတာသာ ခံမည်ကို သတိထားမိလျှင် အချိန်ယူပြီး ပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်ရကောင်းမှန်း အလိုလို သတိထားမိနိုင်ကြမည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရေးသား တင်ပြလိုက်သည့်အတွက် အစ်ကိုကာလသားများက ကျွန်တော့်အား မျက်မာန်ပွားရန် အကြောင်းရှိပါသည်။ ယောက်ျားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါလျက်ကနှင့် ဘဇာ့ကြောင့် မိန်းမသားများ အကျိုးကို ရည်မျှော်ကာ အကုန်လုံး ဖော်လိုက်ပါသနည်းဟု အမေး ရှိလာပါက ကျွန်တော့်မှာ အဖြေရှိပါသည်။
ကျွန်တော်သည် အမေဟူသော မိန်းမသားက မွေးဖွားလိုက်သူ တစ်ဦးဖြစ်ကာ သမီးဟူသော မိန်းမသားတစ်ဦး၏ ဖခင်လည်း ဖြစ်နေသောကြောင့် မအေချင်း၊ နှမချင်း၊ သမီးချင်း စာနာမိရလေသောကြောင့်ဟု ဖြေပါရစေ။
ထို့အပြင် နိဒါန်းတွင် အစချီခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်တော့်ထံရောက် ရှိလာသော ချစ်ဒုက္ခသည် မိန်းမသားများဆီမှ တူညီသော အချက်တစ်ခုကို ဘုံထုတ်လိုက်သည့်အခါ ယောက်ျားတို့၏ အချစ်ကို ယုံမှတ်မှားကြခြင်းကိုသာ ထင်းထင်းကြီး တွေ့ရသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ အချစ်ဆိုသည့်အရာကို အထင်တကြီးနှင့် ရွှေမြင့်မိုရ် တစ်တောင်လုံးကို တုံးမှတ်ပြီး ခုန်လိုက်ကြရာမှ မှောက်လျက်လဲလို လဲ၊ ဒူး ကွဲလိုကွဲ၊ နဖူးပြဲလို ပြဲနှင့် ဖြစ်နေကြတာကို မြင်တွေ့နေရခြင်းလည်း ဖြစ်လေသည်။
ထိုအခါများတွင် အကြင်မိန်းမသားများအား “သူနဲ့ လက်မထပ်ခင်က ရည်းစားသက် ဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲ”ဟု မေးကြည့်သောအခါ အများစုက သုံးလ၊ ခြောက်လစသဖြင့်သာ အဖြေပေးကြပါသည်။ ထိုအခါများတွင် သူတို့တွေ ဒူးနှင့် မျက်ရည်သုတ်နေကြရသည်ကို “နည်းတောင် နည်းသေးတယ်”ဟု ကရုဏာဒေါသောနှင့် ပြောချလိုက်ချင်စိတ်ကို ကျွန်တော့်မှာ မနည်း မျိုသိပ်နေရတတ်ပါသည်။
ယခုတော့ ထိုစိတ်ကို ဘယ်လိုမှ မမျိုသိပ်နိုင်တော့သည်အဆုံး၊ အကုန်လုံး ဖွင့်ချလိုက်မိရပါပြီ။
(၂၀၀၂ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက Fashion Image မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆူဒိုနင်အမည်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။ Blog မှာ တင်ဖို့ ပြန်စီစဉ်တဲ့အခါ ဖြည့်စွက်ပြောစရာလေးတွေ ထပ်တွေ့ပေမယ့် မဖြည့်သင့်ဘူးလို့ ယူဆမိတာကြောင့် မူလ ပုံနှိပ်ဖော်ပြစဉ်ကအတိုင်းသာ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်)
3/ a,mufsm;tawmfrsm;rsm;onf &r®ufESifh tcspfudk a&maxG; cHpm;wwfMuygonf/
]cifhudkjzifh armifwyfrufvdkufwmuG,f}[k tb,fa,musfm; om;\_EIwfurS xGufvmrnfr[kwfyg/ odkYr[kwf]cifeJYjzifh udk,f vufESD;aESmcsifvdkufwmuG,f}[kvnf; b,folurS ajymjzpfrnf r[kwfyg/ xdkodkYajymyguvnf; yg;cscH&udef;&dSrSef; tawmif ESpfq,f0wfawG tm;vHk;aumif;aumif;odMuygonf/ xdka&mtcg uRefawmfwdkY a,mufsm;rsm;onf ]cspfw,f}[laom pum;tvSudk ckwHk;vkyf oHk;wwfMuygonf/
]cifhudkrS r&&if ao&ygawmhr,f}[k twnfayguf ajymae onfhtcgrsm;wGifvnf; cifhcE¨mudk,fudkrS r&&if ao&ygawmhr,f [laomteufu ydkxGufaeygonf/ cifhcE¨mudk,fudk &NyD;onfh aemuf wGifawmh tm;vHk;avsmufvsm;awGjzpfukefrnfudk cifwdkY tm;vHk; BudKrawG;rdMujcif;aMumifhom tdrfaxmifa&;b0rSm rdef;rom;wcsdKU ‘l;ESifhrsuf&nfokwfae&jcif;om jzpfavonf/
txufyg tcsufoHk;csufonf a,mufsm;wdkY\_&ifüjzpfay: wwfjrJ tcspf\_ o½kyfouefudkay:vGifxif&Sm;apavmufonf[k ,HkMunfygonf/
onfae&mwGif wpfoufvHk;wpfa,mufwnf;udkom cspfoGm; aomolrsm; r&dSawmhbl;vm;[kqdkvQif &dSawmh &dSygonf/ odkYaomf tvGef&Sm;vSygonf[k qdkcsifygonf/
uRefawmfhywf0ef;usifwGif jrifawGUqufqHzl;orQ vlaygif; rsm;pGmudk avhvmtuJcwfMunfhaomtcg xdkodkYwpfa,mufwnf; udk wpfoufvHk;cspfaeonfqdkonfh vlpm;rsdK;rsm;rSm rlrSefolrsm; r[kwfMuonfudk awGU&ygonf/
aocsmonfrSmuawmh tdrfaxmifonfa,mufsm;rsm;xJwGif xdkodkY wpfoufvHk;wpfa,mufwnf;cspfoGm;olrsm;udk wpfa,muf qdk wpfa,mufrS rawGUzl;jcif;yifjzpfavonf/ vlysdKBuD;wpfudk,f wnf;orm;rsm;twGif;rSmom xdkxdkaom udkudkopömrsm;udk &Hzef &HcgawGU&wwfavonf/
vlysdKBuD;? vlysdKBuD;ESifh? vpfvQifvpfovdk [dk[dkonfonf &rf;um;wwfaom vlysdKodk;BuD;rsm;&dSovdk qdkcJhonfhudkudkopöm rsm;vnf; &dSonf/ odkYaomf xdkudkudkopömrsm; rlrrSefonfudkvnf; rsuf0g;xifxifjrif&ygonf/ qdkvdkonfrSm tESDudkudkopömrsm; onf a,mufsm;pdwfcsnf; &mcdkifEIef;jynfh &dSraejcif;yifjzpfonf/ wpfenf;tm;jzifh rlrSefvlom;wpfa,mufwGif &dSwwfjrJ vdifpdwf rsm; tm;enf;csdKU,Gif;aewwfonfudk awGU&ygonf/
odkYjzpfaomaMumifh ajymif;jyef jyefajym&vQif yHkrSefvdifpdwf &dSaom vla,musfm;wpfa,muf\_tcspf[lonfum; txufwGif jyqdkcJhonfh tcsufoHk;csuf a&m,Sufyg0ifaeonf[lvdk/
aemufwpfrsdK;rSm udk,fusifhw&m;ESifhusifh0wfpnf;urf;rsm;udk cg;0wfykqdk;uJhodkY jrJjrJjrHjrHESifh aowpfyefoufwpfqHk; vHk;vHk;BuD; apmifhxdef;wwfolrsm;vnf;&dSEdkifygonf/ xdkxdkaomolrsm;rSm &ifü wpfBudrfwpfcgjzpfay:aygufuGJzl;aomtcspfcHpm;rIjzifh tdrfaxmif wpfckudkxlaxmif? xdkYaemuf xdktcspfcHpm;rIysufokOf;aysmufuG,f oGm;onfhtcgrSmvnf; rdrdtdrfaxmifudk opöm&dS&dSESifh qufvuf xdef;odrf;aeygvdrfhrnf/ xyfrHjzpfay:vmaom tm½HkcHpm;rIrsm;udk vnf; owdBuD;BuD;? vHkYvaumif;aumif;ESifh xdef;odrf;NyD; ae xdkifoGm;ygvdrfhrnf/
xdkxdkaom pm&dwåESifh tusifhpm*aumif;jrwfaom a,mufsm; rsm;vnf; r&dSbl;[k ,wdjywfajymír&? &dSEdkifavmufygonf/ odkYaomf wpf&mrSm wpfa,muf? wpfaxmifrSmwpfa,muf? wpf aomif;rSmwpfa,muf[k qdkEdkifavmufatmif &Sm;yg;aomta& twGufrQomjzpfonfudk a’:a’:? rrrsm; odxm;Muapcsifyg onf/
odkYjzpfvQif rdef;rom;wdkYtaejzifh tpfudkyk&dowdkYtm; a0&m rPd? a0;pGma&Smif&awmhrnfavm[k ar;p&mtaMumif;&dSygonf/
xdkodkY a&SmifMuOfapvdkaom oabmapwemjzifh a,mufsm; wdkY\_ cspfjcif;o½kyfudk zGifhxkwftHcsjcif;r[kwfyg/
t”duajymvdkonfrSm a,mufsm;wdkY\_oabmudk ,ckuJhodkY wifwifBudKBudKodxm;MurnfqdkvQifjzifh ajymwdkif;,Hk? êuHwdkif; oem;? Mum;wdkif; trSefrSwfae&onfhb0rS vGwfajrmufausmfvTm; EdkifMurnf[k ,HkMunfrdaomaMumifhjzpfygonf/
trSefuawmh uRefawmf txufu ajymcJhaompum;rsm;udk trdtzrsm;u rdrdwdkY\_ orD;i,frsm; BuD;aumif0ifonfESifhpwif ydkYcsoifMum;ay;Edkifu tvGefyif avsmfuefoifhjrwfygvdrfhrnf/
uRefawmfhx a&mufvmol rdef;rom;wcsdKUrSm rdbrsm;uxdkodkY oGefoifñTefMum;xm;jcif;tvsOf;r&dSonfhtjyif &nf;pm;&dSNyDqdk onfESifh zdql? zd½dkufcH&wmrsdK;rsm;udkom êuH&NyD; tom;emcHae&? pdwfnpfcHae&aomtaetxm;rS ,m,DvGwfajrmufvdkpdwfESifh ZGwfrSdwfrdMu&mrS b0BuD;wpfckvHk; uarmufurjzpfukef&olawG u rsm;aeygonf/ xdkxdkaom trsdK;orD;rsm;udk awGU&aomtcg uRefawmfhrSm &ifxkremjzpf&ovdk qifjcifÓPfuif;rJhvSaom olwdkY\_trdtbrsm;udkvnf; u½kPmoufrd&ygao;onf/
xdktwGuf rdef;rom;wdkY owdcsyf&efudk txufuES,fyif trSwfpOfxdk;NyD; ajymvdkygonf/
1/ a,mufsm;wpfa,mufu rdrdtm; r&vQif raeEdkifatmifcspf aeygNyD? r&vQifao&ygawmhrnf[k ajymvmonfhtcgwGif owd BuD;BuD; xm;oifhygonf/
xdkpum;rsdK;udk r,HkMuygESifh[k rajymvdkyg/ txufwGif &Sif;cJhNyD;jzpfonfhtwdkif; ajymolu xdkodkY ajymaeonfrSm vDq,f aejcif;r[kwfaomaMumifh ,Hkrnfqdku ,HkEdkifygonf/
odkY&mwGif rarhavsmhoifhonfrSmum; r&vQifao&ygawmh rnfqdkonfh tMuifa,mufsm;\_tajctaeonf xdkcPtwGuf om tmrcHEdkifjcif;udk rarhavsmhoifhyg/
2/ r&cifzsmvdkvdyf xdyfay:wif? &NyD;awmh zsmvdkcif;NyD; eif; ajcwwfaom armifwdkYa,mufsm;awGqdkaom pum;rSm >cif;csuf r&dSatmif rSefuefygonf/
r&cifqdkonfhpum;rSm rdrdcE¨mudk,fudk rydkifqdkif&cif[lNyD; em;vnfxm;Muapvdkygonf/ rdrdcE¨mudk,fudk ydkifqdkif&,lNyD; onfhaemufwGif a,mufsm;tawmfrsm;rsm;? a,mufsm;wpf&mwGif 98a,mufavmufuawmh tcsdK;ajymif;oGm;Muonfcsnf;omjzpf ygonf/
xdkYxufqdk;onfrSmum; ]a,mufsm;&onf?} ]rdef;r&onf} [k ajymavh&dSMuaom tdrfaxmifusNyD;onfhaemufydkif;wGifvnf; zsmvdkcif;um teif;cH&wwfonfhtcsufudkvnf; rarhavsmhoifh yg/ tdrfaxmifruscifwkef;u cifhrsufESm wpfcsuftndKrcHcJhzl;ol ayrifh tdrfaxmifonfb0usawmh rsufESmndK½HkruvdkY rwfwwf u vJNyD; aoyGJ0ifawmhrwwfjzpfaeonfhwdkif xif&mvkyfwwf aom a,mufsm;om;rsm;vnf; þ’GEé,mrSm tocsFmtoacFs &dSaeygavonf/
3/ a,mufsm;wpfa,mufu rdrdtm; tvdkcsifqHk;tcsdefwGif olY udk r,lrdatmif xdef;odrf;oifhygonf/ xdkYtwl rdrdu olYudktcspf rdqHk;tcsdefwGif tdrfaxmifûyzdkYta&;udk vHk;0rawG;oifhyg/
rTefonf[k a&SUrSm a&;jycJhygonf/ rTefjcif;onf rnfonfh ae&mwGifrS raumif;yg/ rTefpdwfrSm qifjcifEdkifpGrf; vHk;vHk;uif;rJh oGm;apEdkifaom tmedoif jyif;jyif;BuD; yg&dSaeygonf/
a’gopdwfrTefaomaMumifh wpfzufom;udk temw&jzpfap½Hk rQru olwyg;\_toufudk&ef&Smrdonftxd rSm;,Gif;oGm;ap Edkifygonf/ a’goajyawmhrS aemifw&rdMupjrJvnf;jzpfygonf/
&SufpdwfrTefaomtcg vkyfrdvkyf&mvkyfjzpf&mrS udk,fhtouf udkyif &ef&Smwwfonftxdvnf; rSm;,Gif;apEdkifjyefygao;onf/
tvm;wlyif? tcspfpdwfrTefaecsdefrsdK;wGif a,mufsm;om;rsm; a&m? rdef;rom;rsm;yg qifjcifÓPfuif;rJhaewwfygonf/ xdkY aMumifh olu udk,fhudk tvdkcsifqHk;tcsdefrSm olYudk r,lzdkY? udk,fu olYudk tcspfrd&qHk;tcsdefrSmvnf; tdrfaxmifrûyjzpfMuzdkY tvGef ta&;BuD;vSygonf/ xdkodkY tcspfpdwf tqdyfwufaecdkufwGif csrdorQ qHk;jzwfcsufrsm;tm;vHk;rSm ESpftenf;i,frQMumonfESifh aemifw&p&mawGjzpfukefwwfygonf/
xdkpum;udkr,HkvQif rdrdywf0ef;usifrS eD;pyf&m tdrfaxmif onfrsm;udk wpfa,mufpD ususeear;prf;MunfhMuapvdkygonf/
4/ cdkifrmjrJjrHaom tdrfaxmifa&;wpf&yf wnfaqmufvdkygu tcsdefaumif;aumif; ,loifhygonf/
txufu tcsufESifh wpfqufwpfpyfwnf;pum;yifjzpfyg onf/
a&S;acwfu oHk;ESpfoHk;rdk;[laom qdk½dk;pum;rSm taMumif;rJh r[kwfyg/ tvm;wlyif vufrxyfbJtwlaeonf[laom uRef awmfwdkYESifh b,fvdkrS rtyfpyffonfh taemufwdkif;”avhrSmvnf; w&m;udk,ftm;jzifhrl twlwlyifjzpfygonf/
taMumif;aomfum; vltaMumif; aygif;MunfhrSod&rnfrSm trSefyifjzpfaeaomaMumifhwnf;/ MumMum0g;rS cg;rSef;od qdk onfrSmvnf; vlawGomjzpfygonf/ udk,fESifhcspfaeolrdkY xdkolYudk vlpm&if;xJrSEkwfy,fxm;ír&paumif;yg/ olonfvnf; vlom jzpfojzifh MumMum0g;MunfhvQif cg;csifcg;aeEdkifygonf/
usKyfwdkYacwfu odyÜHacwf? oHk;ESpfoHk;rdk;apmifhp&mrvdkbl;[k ajymaomolrsm;udk tif;av… MunfhMuao;wmaygh[kom pdwf xJu Budwfajymaevdkufygrnf/ vufawGUwGif cdkifrmjrJjrHaom tdrfaxmifa&;rsm;\_ 75&mcdkifEIef;ausmfrSm tdrfaxmifrûyrD tcsdef ,l jyifqifcJhMuaMumif;udk txift&Sm;awGU&ygonf/
a,mufsm;wpfa,muf\_ rTefpdwfrsm; ususeeaysmufjy,fNyD; wnfNidrfEdkifaomtaetxm;odkY jyefvnfa&muf&dSvm&ef tMumqHk; vdktyfaomtcsdefrSm vaygif;20[ktxufwGif wifjycJhygNyD/ xdk twGuf tdrfaxmifûy&ef &nfoefpdwful;aeaom rdef;uav;rsm; taeESifh orD;&nf;pm;ouftm;jzifh tenf;qHk; vaygif;20awmh tcsdef,lNyD;rS pdwful;oifhMuygonf/
tcsdefMumMum,lav? rdrdb0wpfckvHk;twGuf ta&;BuD;vS aom tdrfaxmifa&;rSm &wufayGp&m enf;avavjzpfaeonfrdkY jzpfEdkifvQifawmh tcsdefudk 24v (0g) ESpfESpfwmawmh tenf;qHk; ,lMuyg[k ajymcsifygonf/
Mumavav? cdkifjrJavavqdkonfhtcsufudk owdxm;rdMu vQifjzifh xdkYxuf tcsdef,lEdkifao;uvnf; ,loifhygonf/
Author lettwebawPosted on 13 August 2009 Categories Reproduction
5 thoughts on “For Young Girls to Read: Men’s Love”
14 August 2009 at 8:47 pm
တခါတလေ.. ဖြည့်သင့်တယ်ထင်ရင် ဘလော့အတွက် အချက်အလက်တွေ ထပ်ဖြည့်တာ ကောင်းပါ၏..
15 August 2009 at 1:03 pm
ကိုယ်ကတော့အရင်အတိုင်းဘဲဖတ်ချင်ယ်။ ဖြည့်တွေးတာက နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်စေချင်တယ်။
20 August 2009 at 5:05 pm
မိန်းကလေးတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ် တခုပါ။း)
30 August 2009 at 9:46 pm
ဒါကိုဖတ်ပြီး ဒီလိုရှိတတ်တယ်လို့ ကြိုသိထားရင် တကယ်ကြုံလာလို့ရှိရင် သိပ်မတုန်လှူပ်တော့ဘဲ ခံနိုင်သွားမှာပေမယ့် အဲလိုလူတွေနဲ့မဆုံရအောင် အေးအေးနေလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ တော်တော်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ သူတွေပါပဲ။
ဆရာ့ကိုပွင့်လင်းတဲ့သူဆိုပြီး သဘောကျမိပေမယ့် လုပ်သမျှကိုဝန်ခံတာပဲ ရှိပြီး နောက်မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ သဘောရေးတာ မတွေ့ဘူးသေးဘူး။ နောင်တွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်း သူ့ရဲ့ မိသားစု ၊ လူမှူရေး၊ စီးပွားရေးတွေကိုတော့ အထိခိုက် မခံပါဘူးဆိုပြီးပဲ ပြောထားတာ ဖတ်ရတယ်။ တော်ကြာယောက်ျားလေးတွေ မှားလိုက်၊ လာဝန်ခံလိုက်နဲ့ ဟစ်တိုင်သဘောပဲ ဖြစ်ပြီး နောင်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းမပါတော့ ရင်လေးရတယ်။
မိန်းမရှိရက်နဲ့ ရည်းစားထားတယ် ဆိုတဲ့ ဆရာနဲ့ အဲလိုမျိူးလူတွေကို အံ့သြတာ။ မိန်းမရှိပြီးရင် ရည်းစားဆိုတာ မထားရတော့ဘူးမို့လား။ အဲလို အထားခံတဲ့ မိန်းကလေးကိုလည်း မသိလို့ပဲလား၊ သိရဲ့သားနဲ့ မလွန်ဆန်တာလားဆိုတာ တွေးမရတာ။
လောကကြီးက သိပ်ရှုပ်ထွေးတာပဲ။ မိန်းမတွေကို သနားတယ်။ ယောက်ျားတွေ လုပ်သမျှ ခံနေရလို့။ ယောက်ျားတွေကို ကြောက်တယ်။ အဲလိုလူတွေကိုဆို (အားတော့နာပါတယ်)ရွံမိတာ အမှန်ပါပဲ။
စာကို စုံအောင် ဖတ်ပါလေ။ လောကကြီးဟာ သူတော်စင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလောက်တော့ မြင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အပုပ်ကောင်တွေ ရုပ်ဆောင်နေတာမို့ ရွံစရာကောင်းတဲ့ မျက်ချေး၊ နားဖာချေး၊ သွားချေး၊ ချွေး၊ သေး၊ ကြေးညှော်မှသည် မစင်အထိ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ကပ်တွယ်နေတာလေးကို ရှုမှတ်ဖို့များ လိုမလားပဲနော်။
Previous Previous post: Unpublished Poem
Next Next post: Language: Correct Pronunciations
Lies and an Important Role of Parents
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ - ၈